Mivarahontsana ny any Nizeria ankehitriny noho ny fitotongan’ny vidin-tsolika. I Nizeria izay mpamokatra solika voalohany aty Afrika. Mihalafo ny rehetra : hofan-trano, sakafo … niakatra avokoa afa-tsy ny karama ! Betsaka ny mpiasa manao fitokonana noho izay fisondrotan’ny vidim-piainana izay, saingy tsy mampiova zavatra. Mbola ho mafimafy kokoa ny ho avy, araka ny vaovao avoakan’ny gazety any an-toerana. Tsy hita amin’ny tanàn-dehibe ireo dokambarotra samihafa, manamarina ny tsy fananam-bolan’ny orinasa maro.
Mbola hitohy amin’ity taona 2016 ity ny fidinan’ny vidin’ny akora fototra, ny harena an-kibon’ny tany. Ny mety hampiavaka azy fotsiny, ho latsaka 18 % izany raha nisy 38 % tamin’ny taona 2015. Manaraka ny fidinan’ny vidin-tsolika daholo ireo akora fototra ireo, indrindra ny nikela (vokatra avy ao Ambatovy) sy ny gazy natoraly. Misy ihany ny vidim-bokatra tsara, ohatra, ny kakao misy eto Madagasikara.
Mihena hatrany ny fanjifana divay any Frantsa, misotro 50 litatra isan-taona sisa ny olona iray ankehitriny raha nisy 150 litatra izany tany amin’ny taona 60. Ny famokarana divay no fototra iray miantoka ny toekarena frantsay, nefa izao mandalo fotoan-tsarotra izao ny mpamboly voaloboka sy ny mpamokatra divay. Maro amin’izao fotoana izao ny mpifaninana amin’i Frantsa amin’ny famokarana divay, mampihena ny anjarany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.